5 Wadiiqadood oo laysku waafajiyo Iibka iyo Suuqgeynta si kor loogu qaado Dakhliga | Martech Zone
5 Ways oo la isku waafajiyo Iibka iyo Suuqgeynta si kor loogu qaado Dakhliga
Markasta oo aan macaamil qaadanno, tallaabada ugu horreysa ee aan qaadno waa inaan noqonno macaamil. Isla markiiba uma wici doonno kooxdooda iibka. Waxaan iska qori doonnaa wargeyskooda emayl (haddii ay mid leeyihiin), soo dejiso hanti, jadwal demo, ka dibna sugno kooxda iibka inay nala soo xiriirto. Waxaan ka wada hadli doonnaa fursadda sidii inaan hoggaamiye u noqon lahayn, oo aan isku dayi doonno inaan ku dhex marno wareegga iibka oo dhan iyaga.
Tallaabada xigta ee aan qaadeyno waxay tahay weydiinta kooxda suuq-geynta sida wareegga iibku u egyahay. Waxaan dib u eegeynaa dammaanadda iibka ee suuqgeynta horumartay. Ka dibna waxaan isbarbar dhignaa labada. Waad layaabi laheyd, tusaale ahaan, imisa jeer ayaan aragnaa soo bandhigida suuq geynta ee sida quruxda badan sumadaha loogu abuuray kooxda iibka… laakiin kadib waxaa lagusoo bandhigayaa soo bandhigid iib ah oo cabsi leh oo umuuqata in si dhaqso ah loo abuuray 10 daqiiqo wicitaanka kahor. Sababta Sababtoo ah midka suuqgeynta loogu talagalay kaliya ma shaqeynayo.
Nidaamkani maahan waqti lumis - had iyo jeer wuxuu bixiyaa farqiga u dhexeeya labada dhinac. Xitaa waxaad rabi kartaa inaad ogaato hubinta nidaamkaaga. Uma jeedno tan si aan u dhahno iibka iyo suuqgeyntu waa kuwo aan shaqeyneyn, badanaa badanaa waa in koox kasta ay leedahay habab kala duwan iyo dhiirigelin. Dhibaatada marka nusqaantaani dhacdo maahan in suuqgeynta ay waqti lumineyso… waa in kooxda iibku aysan sare u qaadin ilaha ay ku kobciso kuna xirto iibka.
Waxaan horey u daabacnay su'aalo aad kaweydiisan karto hay'addaada dhexdeeda hubi iibintaada iyo isku-hagaajinta suuqgeyntaada. Brian Downard, Aasaasaha iyo Iskaashatada istiraatiijiyadda ganacsiga ee ELIV8 ayaa isku soo wada ururiyey kuwan 5 hab oo lagu wanaajiyo iibkaaga iyo suuqgeyntaada… Ujeedada wadajirka ah si kor loogu qaado dakhliga.
Mawduucu waa inuu kaxeeyaa iibka, ma aha oo keliya wacyigelinta calaamadaha - ku dar kooxdaada iibka qorshahaaga macluumaadka si aad u ogaato fursadaha iyo diidmada kooxdaada iibka ay maqleyso.
Istaraatiijiyad kobciso liisaskaaga hogaaminta - iibintu waxay ku dhiirrigelisay inay helaan iibka degdegga ah, sidaa darteed way iska dayn karaan hoggaamiyeyaasha suuqgeynta faa iidada badan leh oo laga yaabo inay waqti dheer qaataan
Qeex shuruudaha hogaaminta iibka (SQL) - suuqgeynta ayaa inta badan tuurisa diiwaangelin kasta oo horseed ah, laakiin suuqgeynta internetka ayaa inta badan soo saarta tilmaamo badan oo aan u qalmin.
Abuur Heshiis Heer Adeeg ah oo u dhexeeya iibka iyo suuqgeynta - waaxdaada suuqgeyntu waa inay ula dhaqantaa kooxdaada iibka macaamiishooda, xitaa in lagu sameeyo daraasad ku saabsan sida wanaagsan ee ay ugu adeegayaan iibka.
Cusbooneysii garoonka iibkaaga iyo soo bandhigida - maal gasho nidaamka maaraynta hantida iibka kaas oo hubiya in qalabka suuq geynta ugu dambeeyay la tijaabiyay lana cabiray.
Waxaa jira waxyaabo dheeri ah oo aad sameyn kartid si ay kaaga caawiyaan isu waafajinta iibka iyo suuqgeynta. Wadaagista Tilmaamayaasha Waxqabadka Muhiimka ah (KPIs) sida fursadaha la soo saaray iyo ganacsiga la xiray / la guuleystay ee iibkooda la xiriira iyo tilmaamayaasha suuqgeynta waxay gacan ka geysan karaan aragtida istiraatiijiyadaha sida ugu fiican u shaqeynaya. Xitaa waxaad rabi kartaa inaad daabacdo shaashad la wadaago si aad ula socoto horumarka isla markaana aad ugu abaalguddo kooxaha marka yoolalka la gaaro.
Had iyo jeerna hubso in Iibinta iyo Hoggaaminta Suuqgeynta ay leeyihiin aragti wadaag ah oo midba midka kale uu kala saxiixday qorshihiisa. Shirkadaha qaar xitaa waxay ku darayaan Sarkaalka Dakhliga Madaxa si loo hubiyo isku xirnaanshaha.
Tags: isku xirkaContent Suuqmarketinghogaamiyayaal uqalmaDakhligaKordhinta Iibkasuuqgeynta iibkaisku hagaajinta suuq geyntaiibka hogaanka u qalma
Qiimeynta Marcom: Bedelaadda Tijaabada A / B